मन्त्रिमंडल फेरवदल गर्ने विषयमा सघन छलफल, मन्त्र कुन कुन मन्त्री पदबाट हटदैछन् ? « Kalakhabar
मन्त्रिमंडल फेरवदल गर्ने विषयमा सघन छलफल, मन्त्र कुन कुन मन्त्री पदबाट हटदैछन् ?
प्रकाशित मिति : सोमबार, २५ कार्तिक २०७६ १९:२८
कलाबखर संवाददाता,२५,कात्तिक–काठमाण्डौं । मन्त्रिमंडल फेरवदल गर्ने विषयमा सघन छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा आइतबार छलफल भएको थियो । आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब दुई घण्टा छलफल भएको हो। सोही छलफलको आधारमा आज सोमबार नेकपाको सचिवालयमा बैठक बसेको हो ।
सो बैठकमा केही नयाँ मन्त्री ल्याउने र केही हटाउने विषयमा छलफल भएको छ । पूर्व नेकपा र पूर्व माओवादीबाट नाम तयार गरिदैछ । पूर्व माओवादीबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई हटाउन तयारी छ । पूर्व एमालेबाट महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापालाई हटाउने तयारी भएको छ । अरु नाममा विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
मन्त्री कायम रहेपनि केहीको मन्त्रालय हेरफेर हुनेछ । सञ्चारमन्त्री गोकूल बास्कोटालाई हटाउने या मन्त्रालय फर्नेमा टुङगो लागेको छैन । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेता सुवास नेम्वाङसहितका नेताको मत बास्कोटालाई हटाउनेपर्नेमा देखिएको छ । तीन पटक संसदीय चुनाव जितेका वसन्त नेम्वाङलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत छन्। प्रभु शाहलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी छ ।